သမာဓိကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစနစ်ပိတ်ထား။ | ငါက Mac ပါ
ပြီးခဲ့သည့်အင်္ဂါနေ့ကကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင် OS X El Capitan နှင့် Java 8 ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကို Terminal ရှိ command မှတဆင့် Oracle link မှတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ခြင်းအားဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ ဒီနေ့မှာဒီ (သို့) အခြား Java ဗားရှင်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သောအဆင့်များအနက်တစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည်။ ဤသည်ကို OS X အသုံးပြုသူများအတွက်အကြံပြုသည်မဟုတ်.
SIP မှစနစ်နှင့်သက်ဆိုင်သောဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပိတ်ဆို့သည် (/ System / sbin / usr) installation ဖိုင်များနှင့်အရေးကြီးသောအချက်အလက်များတည်ရှိရာနေရာသည်၎င်းသည် operating system အဆင့်ရှိလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်းတားဆီးပါသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၌မရှိပါက၎င်းသည်အနာဂတ်တွင်ပြofနာများဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားဖိတ်ကြားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဒီကာကွယ်မှုကို disable လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အသိပညာ။ Java တပ်ဆင်မှုအတွက်၎င်းကာကွယ်မှုကိုရပ်ဆိုင်းရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာရမည့်အဆင့်များကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။
1 SIP ပိတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
2 SIP အခြေအနေကိုစစ်ဆေးပြီး SIP ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းပါ
ဤလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်စတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအဆင့်များကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။ ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက Mac ကိုပိတ်ပြီး recovery mode မှာပြန်ဖွင့်ပါ။ ဒီအဘို့အလိုသည် cmd + R ကိုနှိပ်ပါ.
လုံခြုံစိတ်ချရသောစနစ်ဖြင့်စတင်သည်နှင့် OS X Utilities menu ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖွင့်လိမ့်မည်။ ရွေးပါလိမ့်မည် အသုံးအဆောင်များနှင့် Terminal ။ အခု Terminal မှာ csrutil disable လုပ်ပါ။ reboot »သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ကူးယူပြီး paste လုပ်ပါ။ ယခုကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင် SIP ကာကွယ်မှုအားပိတ်ထားပြီးပြီ ဖြစ်၍ ဤလုပ်ငန်းစဉ်အကျိုးသက်ရောက်ရန် Mac ကိုပြန်လည်စတင်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
SIP အခြေအနေကိုစစ်ဆေးပြီး SIP ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းပါ
ဤပိတ်ခြင်းကိုကောင်းစွာပြုလုပ်ပြီးဟုတ်၊ မဟုတ်ကြည့်ရှုရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာ - Java သို့မဟုတ်အလားတူကိုတိုက်ရိုက် install လုပ်ရန်ကြိုးစားသည် ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပြhaveနာမရှိလျှင်ကောင်းစွာပိတ်ထားသည်။ command ကိုလည်းသုံးနိုင်သည်။csrutil အခြေအနေTerminal မှာ startup မှာ cmd + R လို့ခေါ်တဲ့ recovery mode ကနေ ၀ င်ပြီး Terminal က Utilities> Terminal ကိုဖွင့်ပါ။ ဤကဲ့သို့သောအရာပေါ်လာလိမ့်မည်: «System Integrity Protection အခြေအနေ - ပိတ်ထားသည် ကပိတ်ထားသို့မဟုတ် S လျှင်ystem သမာဓိကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး status ကို: enabled သက်ဝင်လျှင်»
လုပ်ငန်းစဉ်ကို reverse နှင့် SIP ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင်၊ စက်ကိုပိတ်ခြင်း၊ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း mode ကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့် Terminal ကိုဆက်သွယ်ခြင်း၊csrutil ကို enable လုပ်ပါ"နှင့် Mac ကို restart လုပ်ပါ.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် OS X ရှိအဆင့်မြင့်သုံးစွဲသူများအတွက်လုပ်ဆောင်ရန်မသင့်တော်ကြောင်း ထပ်မံ၍ အခိုင်အမာဆိုထားသည်။ ထို့ကြောင့်သတိထားပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » OS X (SIP) တွင် System Integity Protection ကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ။
ဆိုလိုတာက java နဲ့သင်သုံးတဲ့အရာအားလုံးက Captain မှာအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတာလား သင်ဤအရာကိုလုပ်ပြီး၎င်းကိုအသုံးပြုသောပရိုဂရမ်များကိုသုံးရန်နှင့် java ကိုသွင်းပြီးပါက၎င်းကိုပြန်ပြောင်းပါ။ ဂျာဗားနေဆဲအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်နည်း ဤအရာများကြောင့် Captain ကို install လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်အနေနှင့်ယုံကြည်မှုနည်းပါးပြီး SIP ကြောင့်ကျွန်ုပ်အသုံးပြုသောအက်ပလီကေးရှင်းအချို့သည်အလုပ်မလုပ်သောကြောင့် ...
ကောင်းပြီ, ငါဖြစ်စဉ်ကိုနောက်ပြန်ဆုတ်ခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကို Java ကိုဆက်လက်သုံးနိုင်ပါလိမ့်မည်ဆိုပါကတကယ်တော့ငါမသိပေမယ့်ငါကတတ်နိုင်သမျှသံသယ။ တိကျတဲ့အရာအတွက် Java သင်လိုအပ်လျှင်၎င်းကိုသင် disable လုပ်ထားရပါမယ်
ဟိုင်းဂျိုဒီ၊ SIP ကို ​​recovery mode မှလွဲ၍ အခြားနည်းလမ်းရှိသလား။
ငါပြန်လည်ထူထောင်ရေး mode ကိုသို့ boot ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါတစ်နည်းနည်းနဲ့ငါ့ကိုအမှား» etc စသည်တို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါမေးသောကြောင့်ဆက်လက်ရန်သော့ကိုနှိပ်ပါ "ဒါကြောင့်ပြန်ပြောပြ။ ငါ MBD 2011 ရှိပြီ ssd ဘယ်မှာ hdd နှင့် hdd ဘယ်မှာ superdrive ရှိသည်။
El Capitan ရှိpoရာမညွှန်းကိုပိတ်နည်း